ဂေဟစနစ်ဒင်္အကဲဖြတ် (EMA), ရိုးရာစစ်တမ်းများတာကိုအပိုင်းပိုင်းသို့သူတို့ကိုငါတက်ခုတ်ခြင်း, သင်တန်းသားများကို၏ဘဝသို့သူတို့ကိုငါဖြန်းဆွတ်ပါဝင်တယ်။ ထို့ကြောင့်စစ်တမ်းမေးခွန်းများကိုဖြစ်ရပ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသည်ဟုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်မဟုတ်ဘဲရှည်လျားသောအင်တာဗျူးအတွက်ထက်, သင့်လျော်တဲ့အချိန်နှင့်နေရာမှာကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
EMA လေး features တွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်: အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ enviroments မှာအချက်အလက်များ၏ (1) စုဆောင်းခြင်း, (2) တစ်ဦးချင်းစီ '' လက်ရှိသို့မဟုတ်အလွန်မကြာသေးမီပြည်နယ်များသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုအာရုံစိုက်ကြောင်းအကဲဖြတ်; (3) ကျပန်းဖြစ်ရပ်-based, အချိန်-based, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကဲဖြတ် (သုတေသနဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပေါ် မူတည်. ) သတိပေးခံရ; နှင့် (4) အချိန်ကျော်မျိုးစုံအကဲဖြတ်မှုများပြီးစီး (Stone and Shiffman 1994) ။ EMA သောအခါ, အလွန်လူတွေကနေ့ကိုတလျှောက်လုံးမကြာခဏအပြန်အလှန်သောစမတ်ဖုန်းများကလွယ်ကူချောမွေ့နေသည်တောင်းဆိုနေတာဖို့ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းအာရုံခံကိရိယာ-ထိုကဲ့သို့သော GPS နဲ့အမျှအတူထုပ်ပိုးကြောင့်ထို့ပြင် accelerometer-ကလှုပ်ရှားမှုပေါ်အခြေခံပြီးတိုင်းတာမှုတွေမှ ပို. ပို. ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်တုံ့ပြန်တဲ့အထူးသဖြင့်ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ဝင်လျှင်ဥပမာအားဖြင့်စမတ်ဖုန်းစစ်တမ်းတစ်ခုမေးခှနျးကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့အစီအစဉ်နိုင်မည်။
EMA ၏ဂတိကြင်နောမိ Sugie ၏စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းသုတေသနများကသရုပ်ဖော်ထားသည်။ 1970 ခုနှစ်မှစ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသိသိသာသာကြောင့်ကိုချုပ်ထားသောကြောင့်လူများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 2005 ခုနှစ်၏အဖြစ်, တိုင်း 100,000 အမေရိကန်များအတွက် 500 ခန့်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားထက်ထောင်ချခြင်း၏နှုန်းမှာပိုမိုမြင့်မား, ထောင်ထဲမှာရှိကြ၏ (Wakefield and Uggen 2010) ။ အကျဉ်းထောင်ဝင်လူဦးရေအရေအတွက်အဆိုပါမြင့်တက်ထောင်ထဲမှာထွက်ခွာအရေအတွက်ကိုတစ်ဦးမြင့်တက်ကိုလည်းထုတ်လုပ်မူပြီ အကြောင်းကို 700,000 လူတွေနှစ်စဉ်ထောင်ထဲမှာစွန့်ခွာ (Wakefield and Uggen 2010) ။ ဤလူသည်ထောင်ထဲမှာထွက်ခွာအပေါ်သို့ပြင်းထန်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရနှင့်ကံမကောင်းအများအပြားပြန်အဲဒီမှာတက်အဆုံးသတ်။ recidivism နားလည်ပြီးလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်, လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများသူတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်ဝင်တတ်သကဲ့သို့လူများ၏အတွေ့အကြုံကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုလေ့လာရန်ခက်ခဲဖြစ်လေ့နှင့်သူတို့၏ဘဝများအလွန်အမင်းမတည်မငြိမ်ကြောင့်သို့သော်ဤဒေတာစံစစ်တမ်းနည်းလမ်းများနှင့်အတူစုဆောင်းရန်ခက်ခဲကြသည်။ တိုင်းလအနည်းငယ်စစ်တမ်းများလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ကြောင်းတိုင်းတာခြင်းချဉ်းကပ်မှုကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုအတွက်ဒိုင်းနမစ်၏ကြီးမားသောပမာဏလက်လွတ် (Sugie 2016) ။
အများကြီး သာ. ကွီးမွတျတိနှင့်အတူ Re-entry process ကိုလေ့လာနိုင်ရန်အတွက်, Sugie Newark, နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းရှိအကျဉ်းထောင်ထွက်ခွာတစ်ဦးချင်းစီ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းထဲက 131 ကလူတစ်ဦးစံဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာယူခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်မှတ်တမ်းတင်အပြုအမူနှင့်မေးခွန်းများမေးဘို့နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ဦးကြွယ်ဝသောဒေတာများစုဆောင်းခြင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်ပေးသောစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူအသီးအသီးပါဝင်သူဖြစ်သည်။ Sugie စစ်တမ်းများနှစ်မျိုးစီမံခန့်ခွဲဖို့ဖုန်းများအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာသူမဟာသူတို့ရဲ့လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကိုအကြောင်းကိုသင်တန်းသားများကိုတောင်းဆိုနေတာနံနက်9နဲ့6နာရီကြားတစ်ဦးကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်အချိန်မှာ "အတွေ့အကြုံကိုနမူနာစစ်တမ်း" ကိုစေလွှတ်။ , ဒုတိယအချက်,7pm အချိန်မှာသူမကထိုနေ့ရက်အပေါငျးတို့သလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. မေးမြန်းခြင်းကို "နေ့စဉ်စစ်တမ်း" ကိုစေလွှတ်။ , နောက်ထပ်အဲဒီစစ်တမ်းမေးခွန်းများအပြင်, ထိုဖုန်းများကိုပုံမှန်ကြားကာလမှာသူတို့ရဲ့ပထဝီတည်နေရာမှတျတမျးတငျထားနှင့်ခေါ်ဆိုခနှင့်စာသား Meta-အချက်အလက်များ၏ encrypt လုပ်ထားမှတ်တမ်းများထားရှိမည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု-ရာ-Sugie စောင့်ကြည့်မေးမြန်းခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းသူတို့ re-ထဲသို့ဝင်အဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဤလူများ၏ဘဝများနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်းတာတဲ့အသေးစိတ်, High-အကြိမ်ရေသတ်မှတ်ချက်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သုတေသီများတည်ငြိမ်, အရည်အသွေးမြင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာကလူကိုအောင်မြင်စွာလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ပြန်ရောက်ပြောင်းလဲကူညီပေးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် Sugie ပျမ်းမျှအားဖြင့်သူမ၏သင်တန်းသားများကို '' အလုပ်အတွေ့အကြုံများကို, အလွတ်သဘောယာယီနှင့်ကြိုကြားကြိုကြားခဲ့ကြသည်, ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပျမ်းမျှပုံစံ, သို့သော်, မျက်နှာဖုံးများအရေးကြီးသောသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏ဤဖော်ပြချက်။ (အလုပ်ရှာဖွေနေကာလများစွာဖြုန်းသောသူတို့အား) "မြဲရှာဖွေရေး", "အစောပိုင်းထွက်ပေါက်" (အလုပ်ရှာဖွေနေ start ပေမယ်ထို့နောက်အလုပ်သမားဈေးကွက်ထဲက drop သောသူတို့အား): အထူးသဖြင့်, Sugie သူမ၏ပါဝင်သူရေကူးကန်အတွင်းလေးခုကွဲပြားပုံစံများကိုတွေ့ရှိခဲ့ "ထပ်တလဲလဲအလုပ်" (ကာလအလုပ်လုပ်အများကြီးဖြုန်းသောသူတို့အား), နှင့် "အနိမ့်တုံ့ပြန်မှု" (ပုံမှန်စစ်တမ်းများတုံ့ပြန်ဘူးသောသူတို့အား) ။ အဆိုပါ "အစောပိုင်းထွက်ပေါက်" အုပ်စုတစ်စု-သူတွေကိုအလုပ်ရှာဖွေနေ start ထိုအခါမူကားရှာဖွေနှင့်ဤအုပ်စုတွင်အောင်မြင်သော Re-entry ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ကောင်းအနည်းဆုံးဖွယ်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသော-ဖြစ်ပါတယ်ရှာဖွေနေကိုရပ်တန့်ကြဘူးတဲ့သူ။
တဦးတည်းထောင်ထဲမှာဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေစိတ်ကျရောဂါနှင့်လုပ်သားစျေးကွက်ကနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောခက်ခဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်, ကြောင်းကိုစိတ်ကူးပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, Sugie အလွယ်တကူအပြုအမူဒေတာကနေခန့်မှန်းမရကြောင်းသင်တန်းသားများကို-အနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်အကြောင်းကိုဒေတာစုဆောင်းရန်သူမ၏စစ်တမ်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသူက "အစောပိုင်းထွက်ပေါက်" အုပ်စုတစ်စုစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်မပျော်ရွှင်၏အဆင့်မြင့်သတင်းပို့မပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစား, ကဆန့်ကျင်ဘက်ခဲ့: အလုပ်ရှာဖွေဆက်လက်တဲ့သူတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကိုပိုပြီးခံစားချက်တွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ဤအချော-ဆန်စပါး, longitudinal အသေးစိတ်အားလုံးနှင့်ဟောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတားအဆီးတွေကိုနားလည်ပြန်လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့မိမိတို့၏အကူးအပြောင်းဖြေလျော့ဘို့အရေးကြီးပါသည်။ ထို့ပြင်ဒီဒဏ်ငွေ-စပါးကိုအသေးစိတ်အားလုံးတစ်ဦးစံစစ်တမ်းများတွင်လွဲချော်ခဲ့ကြပေသည်။
တစ်ဦးအားနည်းချက်လူဦးရေနှင့်အတူ Sugie ရဲ့ဒေတာစုဆောင်းခြင်း, အထူးသဖြင့် passive ဒေတာစုဆောင်းခြင်း, အချို့သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြှင့်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် Sugie သည်ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်သူမ၏ဒီဇိုင်းအတွက်သူတို့ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း (Sugie 2014, 2016) ။ သူမ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတတိယပါတီ-သူမ၏တက္ကသိုလ်ရဲ့ Institutional ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘုတ်အဖွဲ့-အပေါင်းတို့နှင့်တည်ဆဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင်ငါအခနျးကွီး6အတွက်ထောက်ခံသောအခြေခံမူ-based ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း, Sugie ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုဝေးတည်ဆဲစည်းမျဉ်းများကလိုအပ်သည့်အရာကိုကျော်လွန်သွား၏။ ဥပမာအားဖြင့်, သူမကယာယီပထဝီခြေရာခံခြင်းကို turn off မှသင်တန်းသားများကို enabled နှင့်သူမသည်စုဆောင်းခံခဲ့ရသောဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အကြီးအတိုအရှည်ထံသို့ ဝင်. , တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူထံမှအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအသိပေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။ သင့်လျော်သော encryption ကိုနှင့်အချက်အလက်သိုလှောင်မှုသုံးပြီးအပြင်, သူမလည်းသူမရဲမှသူမ၏ဒေတာကျော်ဖွင့်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရနိုင်ဘူးဆိုလိုသောဖက်ဒရယ်အစိုးရအနေဖြင့်လျှို့ဝှက်ထား၏လက်မှတ်, ရရှိသော (Beskow, Dame, and Costello 2008) ။ ငါရှိသောကြောင့်သူမ၏စဉ်းစားဟန်ချဉ်းကပ်၏, Sugie ရဲ့စီမံကိန်းကိုသည်အခြားသုတေသီများမှတန်ဖိုးရှိသောမော်ဒယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သူမတစ်ဦးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ morass သို့ဆင်ကန်းတောတိုးထိ မိ. လဲကြဘူး, မကြောင့် Ethics ရှုပ်ထွေးကြောင့်သူမအရေးကြီးသောသုတေသနကိုရှောင်ရှားခဲ့ပေ။ ယင်းအစားသူမဂရုတစိုက်စဉ်းစားသင့်လျော်သောအကွံဉာဏျကိုရှာသူမ၏သင်တန်းသားများကိုလေးစား, သူ့လေ့လာမှုများ၏အန္တရာယ်-အကျိုးအတွက်ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်လာဖို့ခြေလှမ်းတွေကိုယူ။
ငါ Sugie ရဲ့အလုပ်ကနေသုံးယေဘုယျသင်ခန်းစာများရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာမေးအသစ်ချဉ်းကပ်နမူနာများ၏ရိုးရာနည်းလမ်းများနှင့်အတူလုံးဝသဟဇာတဖွစျကွ၏ Sugie တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ဘောင်လူဦးရေကနေစံဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ ယူ. မှတ်မိသေးတယ်။ ဒုတိယအချက်အမြင့်မားအကြိမ်ရေ, longitudinal တိုင်းတာမမှန်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ကြောင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများလေ့လာနေဘို့အထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်။ တတိယ, ငါသည်ဤအခနျးတှငျ-နောက်ထပ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုအတွက်နောက်ပိုင်းမှာငြင်းပါလိမ့်မယ်အဖြစ်စစ်တမ်းဒေတာစုဆောင်းခြင်းပေါ်ထွန်းနိုင်, ငါ ပို. ပို. အဖြစ်များဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ကြောင်းကြီးတွေဒေတာသတင်းရင်းမြစ်-တစ်ခုခုနဲ့ပေါင်းစပ်သောအခါ။ ကျွန်မအခန်း6တွင်ပိုမိုအသေးစိတ်သုတေသနပြုကျင့်ဝတ်ဆက်ဆံပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် Sugie ရဲ့အလုပ်ကဤကိစ္စများအသိစိတ်နှင့်စဉ်းစားဟန်သုတေသီများအားဖြင့်လိပ်စာဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။